Fahamarinana na Sahia amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany: etika sy lainga
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Fahamarinana na Sahia amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany: etika sy lainga
Airlines • Airport • Aviation • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Namaky 10 aho
Fahamarinana na Sahia amin'ny Travel sy fizahan-tany
Ny lainga dia toy ny vatomamy ao amin'ny fivarotana vatomamy, tonga amin'ny loko sy habe samihafa izy ireo ary manolotra traikefa samihafa. Androany, ao anatin'ny tontolon'ny fitsangantsanganana sy fizahan-tany misavoritaka, mifanena amin'ny etika sy ny lainga ny etika sy ny lainga. Ny lainga sasany dia atosiky ny vola sy ny fitiavam-bola, ny lainga hafa dia entanin'ny filan'ny ego. Ny olona sasany handainga hisorohana ny sazy, ny hafa handainga amin'ny fientanam-po amin'ny fialana amin'ny lainga, fa ny hafa kosa mandainga hanarona lainga teo aloha.
Ny olona tsirairay dia mety handainga kely na betsaka, mifototra amin'ny faminaniany ny valiny. Amin'ny indostria sasany dia mampalahelo ny lainga (izany hoe, dokotera dia manoratra fanafody anaovany zanabola ary mihombo ny valiny omen'ny marary). Amin'ny toe-javatra hafa, ny lainga dia fanelingelenana (izany hoe ireo mpitantana orinasa dia mifantoka amin'ny fitifirana ireo mpanatanteraka mba hanodinana ny sain'ny fivarotana mihena). Ny lainga matetika ataon'ny orinasa dia fantatra amin'ny hoe One Stop Shop Syndrome izay misy orinasa milaza fa manangona ny zavatra ilainao rehetra nefa manome kely noho ny zava-bita tsara ho an'ny ankamaroan'izy ireo.
Ivotoerana momba ny etika
Ny fikarohana nataon'ny Ethics Resource Center dia nahitana fa ny indostria mety hanilika ny fahamarinana dia ny fandraisam-bahiny sy ny sakafo (34 isan-jaton'ny mpiasa nahita lainga); zava-kanto, fialamboly ary fialamboly (34 isan-jato) ary mpivarotra ambongadiny (32 isan-jato). Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, lainga no ampiasaina hanaloka ny tena zava-misy. Ny sambo fitsangantsanganana dia mandainga momba ny fiarovana sy ny fahadiovan'ny sambony ary marary ny mpandeha ary maty noho ny karazana virus. Ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny dia mandainga hanaronana toerana mahantra, tsy fahasalamana rivotra avy amin'ny rafitra HVAC tsy ampy, na fitanisana avy amin'ny sampana fahasalamana noho ny lakozia feno olona roach. Ny indostrian'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia mandainga momba ny kalitaon'ny rivotra eny an-tsambo handrakofana ny zava-misy amin'ny fizarana virus amin'ny alàlan'ny rivo-drivotra sy ny aretina ateraky ny kabine voatsindry.
Truth or Dare dia mizaha ny indostrian'ny fizahantany amin'ny fikarohana ny marina ary manome tolo-kevitra fa, rehefa hiroso amin'ny 2021 isika, ny fahamarinana dia lasa fototra ho an'ny asa aman-draharaha rehetra ary ampahany lehibe amin'ny ezaky ny varotra sy ny fifandraisana amin'ny daholobe.
COVID-19: Ny aretina. Ny Lainga.
Raha tsy hoe miaina eo ambanin'ny vatolampy ianao dia fantatry ny besinimaro fa ny Aretina Coronavirus (COVID-19) dia mifindra ary ateraky ny coronavirus (SARS CoV 2). Ny porofo ankehitriny dia milaza fa ampitaina indrindra amin'ny olona amin'ny alàlan'ny rotsaka na rotsak'orana ny orona rehefa mikohaka na mievina ny olona iray voa, ary ny hafa kosa mifandray mivantana na tsy mivantana amin'ireo tsiambaratelo ireo. Ny tazo, kohaka, fahaverezan'ny na fanovana ny fahatsapana fofona na tsiro, ny fihenan'ny tratra, fanaintainan'ny hozatra, havizanana ary sempotra no fambara voalohany voalaza.
Raha ny ankamaroan'ny olona voan'ny virus dia hiaina aretina malefaka sy antonony ary ho sitrana nefa tsy mila fitsaboana manokana, dia misy vondron'olona antitra (manana olana ara-pahasalamana) izay mety hivoatra sy hiaina karazana aretina mafy kokoa. Ho fanampin'izany, ny vondrona foko mainty, aziatika ary vitsy an'isa dia mety hanana tranga matotra kokoa amin'ity aretina ity.
Nanomboka tamin'ny volana martsa 2020 dia miharihary fa ny COVID-19 dia tsy gripa na sery, na dia misy aza ny mpitondra eran'izao tontolo izao na amin'ny sehatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana izay nanandrana nandresy lahatra antsika raha tsy izany. Mandeha haingana ny lainga; haingana dia haingana Cordell Hull, sekreteram-panjakana amerikana ary "rain'ny Firenena Mikambana," dia nihevitra fa, "hisy lainga hivezivezy eraky ny tontolo manerantany alohan'ny fotoana hisian'ny fahamarinana hisintona ny kabariny (1948)." Ny fahitany azy dia nitranga tany antenatenan'ny taonjato faha-20, talohan'ny Twitter, Facebook, ary Instagram. Amin'ny taona 2020, ny lainga dia lasa zava-misy amin'ny nanoseconds.
Hatramin'ny nanekena ny COVID-19 fa areti-mifindra dia nahatratra 49.6 tapitrisa ny olona namono ary namono olona mihoatra ny 1.2 tapitrisa (CNN.com, 7 Novambra 2020) ary ny lainga mifandraika amin'ity virus ity dia naparitaka tamin'ny media sosialy. Ny fampahalalana diso dia notohanan'ny mpitondra eran'izao tontolo izao tsy misy fiaviany na traikefa amin'ny siansa ary atosiky ny matihanina ara-pitsaboana sy ara-politika manana fanabeazana mampiahiahy, traikefa ary antony manosika.
Ny fanaparitahana vaovao diso (na zava-misy mifandimby) dia dingana sarotra iray izay mamaky fifehezana maro manomboka amin'ny fikarohana dizitaly ka hatramin'ny psikolojia, saina ary ny siansa momba ny fitondran-tena mifandraika amin'ny fifandraisana amin'ny besinimaro, dokam-barotra ary marketing. Ny fahafaha-mandainga dia nokolokoloina nandritra ny am-polony taona lasa tamin'ny fampitomboana ny dokam-barotra sy ny fifandraisana amin'ny daholobe izay mety hanafina na hanarontsaronana ny fahamarinana ny filàna mivarotra vokatra, mandrisika ny mpanjifa tsy hijery ny kileman'ny vokatra na serivisy ary / na switch ny filàna / filan'ny mpanjifa amin'ny vokatra / serivisy misy amin'ny vidiny avo kokoa.
Ny indostrian'ny hotely, fizahan-tany ary fizahan-tany dia mpiray tsikombakomba amin'ny fampahalalana diso diso ho an'ireo mety ho mpandeha. Gazety fitsangatsanganana sy fialamboly sary an'habakabaka hotely, trano fisakafoanana ary olo-malaza, manafina ny triatra ao anaty simenitra, ny holatra maniry ao amin'ny dobo filomanosana, ny tsy fisian'ny fasika eny amoron-dranomasina, ary ny zava-misy fa ny olo-malaza mankafy fety dia omena vola be fahazoan-dàlana ho azy ireo ho hita ao amin'ny toeram-pivarotana (izay fampiantranoana azy ireo).
Ny tolo-kevitry ny trano fandraisam-bahiny ho an'ny trano fisakafoanana, klioban'ny alina na mpitsabo nify tsara indrindra dia mety tsy miangatra. Ny trano dia mety manana fifandraisana amin'ny trano fisakafoanana eo an-toerana (na an'ny tompon'andraikitra hotely), na nilaza fa tsy misy na inona na inona akaiky toy ny efitrano fisakafoanana ao amin'ny hotely, na omena karama ny mpikaroka ny mpitarika ny vahiny amin'ny fivarotana na manintona manokana. .
Orinasa manofa fiara manandrana mamitaka ny mpanjifany amin'ny sehatry ny varotra izay mamporisika ny fividianana fiantohana tafahoatra izay tsy ilaina; voampanga ho an'ny fahasimbana tsy noforonin'izy ireo; be loatra ny vidin'ny solika; voafitaka momba ny vidiny ary voafitaka tamin'ny fanavaozana "fiderana" izay mety misy sarany miafina.
Lainga ny trano fisakafoanana. Amin'ny ankapobeny, ny "holatra dia" ao anaty menio dia nobeazina. Ny vinaingitra balsama (vita amin'ny volom-boaloboka mihena izay efa antitra taona na am-polony taona maro, ao anaty vatan-kazo) dia mety tsy hanompoana ao amin'ny burger joint. Ny menio dia mety hiantso azy io hoe Balsamic, fa azo inoana fa ny vinaingitra mena miaraka amin'ny loko karamel sy siramamy. Ny ankamaroan'ny lovia misy "truffle" amin'ny anarana dia tsy misy truffles; matetika ny mpanjifa dia omena menaka oliva ampidirina amin'ny fofona synthetic natao hanahaka ny fofon'ny truffles tena izy.
Lainga no tanjona. Ny nosy Karaiba dia nilaza fa ny harona ao amin'ny tsenan-mololo dia nataon'olona mpanao asa tanana teo an-toerana; jereo ny sisin-tsoratr'ilay zavatra ary mazava fa natao tany Chine izy io. Ny fampielezan-kevitry ny fifandraisana amin'ny daholobe sy ny dokam-barotra ataon'ny Repoblika Dominikanina dia ahitana torapasika tsara sy hotely mahafinaritra. Ny tsy zaraina dia ny fananany torohevitra momba ny fitsangatsanganana ambaratonga faharoa an'ny Departemantam-panjakana amerikana momba ny fandrobana mitam-piadiana, famonoana olona ary fanaovana herisetra ara-nofo.
Mandainga ny Influencers Travel, milaza fa tonga lafatra ny sary. Fotoana fohy hijerena ny zava-misy… jereo… na dia ireo toerana “instagrammable” mahafinaritra indrindra aza dia manana olana eran'izao tontolo izao toy ny tsy fananan-trano, ny biby mania, ny loto ary ny heloka bevava.
Ireo sambo fitsangantsanganana an-tsambo dia mpanaparitaka vaovao diso izay mety, indrisy fa mitarika aretina sy fahafatesana. Ny fatra fampahalalam-baovao diso farany dia mifantoka amin'ny tontolo azo lazaina ho azo antoka ho an'ny mpandeha, mamporisika ny vahiny tsy hanahy ny amin'ny COVID-19 (na aretina hafa mifindra toy ny Norovirus). Nambaran'izy ireo ihany koa fa hilamina ny dia. Fanamarinana marina: 2018, ireo sambo fitsangantsanganana an-tsambo dia nitatitra fa 120 no voalaza fa heloka bevava (ie, herisetra, fakana ankeriny, fanafihana maratra mafy, fitifirana na fanodikodinana sambo sy halatra $ 10,000) (Departemantan'ny fitaterana - DOT); 2020, Center for Disease Control dia nanapa-kevitra fa nanomboka tamin'ny 1 martsa-10 jolay 2020, tranga 2,973 ny COVID-19 na ny aretina toa ny Covid dia niseho tamin'ireo sambo fitsangantsanganana nahitana 34 maty. Nandritra io fe-potoana io ihany dia nisy 99 ny valan'aretina 123 sambo fitsangantsanganana izay maneho ny 80 isan-jaton'ny sambo amerikanina.
Ny fitsangantsanganana an-tsambo dia mety milaza fa sariaka amin'ny tontolo iainana; na izany aza, maro no manary fako any amin'ny ranomasina. Tamin'ny taona 2016, nandoa onitra 40 tapitrisa dolara amerikana ny Princess Cruise Line noho ny fanariana ny "fako misy menaka" ao anaty ranomasina. Hitan'ny fikarohana fa ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo dia mandray anjara 24 isan-jato amin'ny fako marobe ateraky ny fifamoivoizana an-dranomasina erak'izao tontolo izao; Ny sambo lafo vidy dia afaka mamokatra fako fito taonina sy fako matevina ao anatin'ny iray andro. Ny fanadihadiana ihany koa dia namaritra fa ny rivotra eny amin'ny faritra lavitra an'ny sambo fitsangantsanganana, (fandotoana zavatra bitika), dia maloto tahaka ny rivotra any amin'ireo tanàna maloto be eto amin'izao tontolo izao, toa an'i Beijing, PRC (marineinsight.com).
Entanina ireo mpanjifa mba “hanidina ny lanitra feno fisakaizana”, raha atondraka eny amin'ny habakabaka izy ireo tahaka ny haben'ny kiraron-jaza; namahana sakafo be kaloria, ambany sakafo maivana, ary noterena hihaona amina toerana tsy madio izay tsy mahafeno ny fenitra andalana amin'ny firenena fahatelo. Ny mpitantana kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amin'izao fotoana izao dia maniry ny hividianan'ireo mpandeha ny làlam-pitantarany vaovao izay mahita fa azo antoka ny sidina ary ny COVID-19 dia tsy hanana temerity hiditra ao amin'ny tranony. Ny tsy noresahin'izy ireo dia ny fandinihana an'i Harvard izay naloan'ny zotram-piaramanidina.
Vakio eto ny fizarana 1 amin'ity andiany fizarana 3 ity.
CDC dia namoaka hafatra maika ho an'ny Amerikanina ...